Challenge The Good News Paper - NdiJesu harisi rombo rakanaka (Shona)
NdiJesu harisi rombo rakanaka (Shona)
Mugore ra2009 Noel Moses akaverenga bepanhau raitaura nezvemumwe mutana aiva nemakore makumi masere uyo akanga achibviswa makodo eropa ainge avhara tsinga dzinobvisa ropa mumoyo. Izvi zvakavhundutsa Noel uyo akanga ava nemakore makumi matanhatu,zvekuti akabva afunga zvekuona vanachiremba,kuti vatarise moyo wake. Vanachiremba vakamuudza kuti aivawo nemakodo eropa matanhatu ainge akavhara tsinga dzake. Chiremba wetsinga akaudza Noel kuti tsinga huru inoendesa ropa kumoyo yakanga yavharika zvokuti akange asara nesvondo mbiri dzokurarama kana akasarapwa munguvashoma yaitevera. Noel akazovhiiwa tsinga iyoyi zvakafamba zvakanaka.
Noel anoti" vanhu vazhinji vanoti ndakaita rombo rakanaka asi ini handitendi murombo rakanaka asi munaKristu."
Panguva iyi Noel akanga atozvipira kunaKristu kubva arimukomana mudukuduku kwazvo
Noel akakurira muupenyu hwechiKristu uye Mbuya vake vaigaroenda naye kukereke mukukura kwake kwose
Nyangwe zvakadaro, hupenyu hwakanga hwakaoma zvikuru nokuti pamakore mashanu, vabereki vake vakabva varambana mumakore ekuna 1950,ndokusara achirerwa naamai vake avo vaihora makumi maviri epindo ane pondo shanu. Mari iyoyi yaichengeta vana vashanu
Paakange Ava nemakore Gumi nemashanu Noel akadhumwa nemotokari pakarepo akaendeswa kuchipatara uko vakamuudza kuti akanga asina kukuvara asi izvi zvakaita kuti Noel afungisise nezveupenyu hwenweya wake,ipapo ndipo paakazvipira kunaKristu. Zvakadaro Noel akaziva kuti akanga asina kuita rombo rakanaka asi aiva Jesu Kristu.
Noel akaita munamato wokupupura zvivi zvake iye nokukumbira kuregererwa . Kubva ipapo Noel anoshingaira achiparidzieawo vamwe tariro yaakawana munaKristu.
Noel anoti" parizvino ndaparidzira vanhu vanopfuura zviuru Gumi nezvekuponeswa kwangu, ndatenderera Nyika zhinji dzinoti, Australia, Sri Lanka, Cuba, England pamwe neScotland sezvinoonekwa murunhare rwake rwemuhombodo.
Noel anoparidzawo Shoko nenzira yokugashidza vanhu magwaro evhangeri yakanyorwa naJohani pamwewo nepepanhau reChallenge
Noel anopa kurudziro yokuti" chinhu chinokoshesesa muupenyu inyaya yako naKristu iyi ndiyo nyaya inonongedza gwara roupenyu hwako nokusingaperi, kuti uchahupedzera kudenga here kana kuti kugehena naizvozvo vimba naJehovha nomoyo Wako wose, usavimba nepfungwa dzako, pane zvose zvaunoita rangarira Jehovha iye achaswatura nzira dzako."zvirevo. 3:5-6
Imwe ndima inofarirwa naNoel ndeinoti" Mwari wakada Nyika nokudaro akaipa mwanakomana wake kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi. " Johani. 3:16.
Sezvanofarira kutaura Noel zvokuti, ndiJesi harisi rombo rakanaka raita kuti uverenge chinyorwa chino, naizvozvo zvipire kunaKristu nhasi.
Kana Uchida rubatsiro vhura peji yechinomwe yepepanhau rino ushandise chikamu chine mibvunzo nemhinduro kuti uzive zvakawanda.•
<< Kwakungesiyo inhlanhla, Kwakungu-Jesu (Zulu)
John 16:16-33 - The Gospel of John >>